မိတ်ဖက်စကားလုံးများ - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on January 9, 2014 at 10:14 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အင်္ဂလိပ်စာမှာ sentence တစ်ကြောင်းသည်
(၁) subject နဲ့ verb ရှိရမည်။
(၂) complete thought ကိုဖော်ပြရမည်။
(၃) meaningful အဓိပ္ပါယ်ရှိရမည်
တဲ့ ဤသုံးချက်နဲ့ကိုက်ညီမှ ၀ါကျမည်သည်လို့ဆိုပါတယ်။
Linguistic ပညာရှင် Noam Chomsky က syntax နဲ့ semantic ကိုခွဲပြချင်လို့ ၁၉၅၇ မှာ သူ့စာအုပ် Syntatic Structures စာအုပ်မှာအောက်ပါစာကြောင်းလေးရေးပြခဲ့ပါတယ်။
"Colorless green ideas sleep furiously." ၄င်းစာကြောင်းသည် သဒ္ဒါဖွဲ့စည်းပုံအရ မည်သို့မျှအပြစ်ဆိုစရာမရှိသော်လည်း မည်သည့်အဓိပ္ပါယ်ကိုမှဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပေ။
စာသင်သားတို့အတွက် အထက်ပါဥပမာလေးသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုတတ်ကျွမ်းရန် သဒ္ဒါချည်းသက်သက်လေ့လာနေ၍မရကြောင်း သင်ခန်းစာတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။
အင်္ဂလိပ်စကားကို သဘာဝကျစွာပြောဆိုရေးသားနိုင်ရန် collocations
များကိုလေ့လာရန်လိုအပ်သည်။ co = ပူးတွဲ၊ location = တည်နေရာ။ ပူးတွဲသုံးလေ့ရှိသည့်စကားလုံးများဖြစ်သည်။ မိတ်ဖက်စကားလုံးများ word partners ဟုဆိုလျှင်ရမည်ထင်သည်။ အဆိုပါစကားလုံးတို့သည် ဘာသာစကားတစ်ခုနှင့်တစ်ခု တူညီမည်မဟုတ်ချေ။ ဥပမာ မြန်မာစကားတွင် “လွတ်သွားသည်” သည် “ဆုံးရှုံးလိုက်ရသည်” “လက်လွှတ်လိုက်ရသည်” ဖြစ်သဖြင့် “ဆုံးရှုံးလိုက်ရသည်” = lose ဟုဘာသာပြန်ရမည်ဖြစ်သည်။ “ဘတ်စ်ကားလွတ်သွားသည်” ကိုမြန်မာလိုစဉ်းစားပြော သည့်အခါ I lost the bus ဟုဆိုလျှင် အင်္ဂလိပ်တို့ မသုံးသည့် ထူးဆန်းသည့်စကားဖြစ်နေမည်။ မြန်မာတို့နားတွင် “ကျွန်ုပ်ကိုရေချမ်းချမ်းတစ်ခွက်ပေးပါ” ဟူသည့်စကားလို ကန့်လန့်ဝင်မည့်စကားဖြစ်သည်။ တစ်ကယ်က I missed the bus (= I didn’t catch the bus) ဟုသာပြောရမည်ဖြစ်သည်။ collocation များတွင် verb နှင့် noun တွဲသည့်စကားလုံးများ၊ adjective နှင့် noun တွဲသည့်စကားလုံးများ၊ adverb နှင့် adjective တွဲသည့်စကားလုံးများ စသည်ဖြင့်မြောက်များစွာရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် ၄င်းတို့သည် နေ့စဉ်သုံးစကားတွင် ရာခိုင်နှုန်းကြီးမားစွာနေရာယူ ထားသဖြင့် မဖြစ်မနေ လေ့လာထားရန်လိုအပ်လှသည်။
မိမိ၏ရည်မှန်းချက်သည် near native အင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုမိခင်ဘာသာစကား အနေနှင့် ပြောသူများနီးပါး ပြောတတ်လိုပါက “learn the language by chunks” ဟူသည့်စကားကိုနာယူသင့်သည့်အတွက် collocation များသည်အထူးဂရုစိုက်ရမည့် နယ်ပါယ်ဖြစ်သဖြင့် လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
She madeamistake. [NOT She didamistake.] သူအမှားလုပ်မိတယ်။
A heavy smoker (= someone who smokesalot) [NOTastrong smoker orabig smoker ] ဆေးလိပ်အလွန်သောက်သူ
It wasaserious illness [NOTabig illness orastrong illness ] ပြင်းထန်သည့်ဖျားနာမှု
Verb + noun အတွဲ
သာမန်ကြည့်မည်ဆိုလျှင် အောက်ပါ collocation များ၏အဓိပ္ပါယ်ကို နားလည်လွယ်သည်ဟု ယူဆကြမည်ဖြစ်သည်။ မိမိကိုယ်တိုင်ရေးကြည့်သည်အခါမှ မည်သည့်စကားလုံးနှင့်တွဲရမည်ကို ဝေခွဲမရဖြစ်ကြမည်ဖြစ်သည်။ (မြန်မာစကားတွင်လည်းအတူတူပဲလား နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ကြည့်ပါ)
start the car (= turn on the engine) ကားစက်နှိုးသည်။
startafamily (= think about having your first child) ကလေးယူဖို့စဉ်းစားသည်။ (မိသားစုဘ၀စတင်သည်။)
tellastory ပုံပြောသည်
tell the truth/ tellalie အမှန်ပြောသည်။ လိမ်ပြောသည်။
tellajoke ဟာသပြောသည်။
runashop/company (= manage/control it) ဆိုင်ဖွင့်သည်။ ကုမ္ပဏီဖွင့်သည်။
get on / get offabus ဘတ်စ်ကားပေါ်တက်သည်။ ဘတ်စ်ကားမှဆင်းသည်။
get in(to)acar /get out (of)acar ကားပေါ်တက်သည်။ ကားပေါ်မှဆင်းသည်။
missaperson (= be unhappy because that person is not there) = (တစ်စုံတစ်ယောက်အားလွမ်းသည်။)
missalesson (= when you don’t come toalesson) သင်္ခန်းစာလွတ်သွားသည်။
Adjective + noun အတွဲ
နာမ်မ၀ိသေသနသည် နာမ်ကိုအထူးပြုသဖြင့် adjective သည် noun နှင့်တွဲသည်မှာမထူးဆန်းပါ။
a soft drink (= non-alcoholic drink) အချိုရည်
a soft voice /a loud voice နူးညံ့သည့်အသံ။ တိုးသည့်အသံ/ ကျယ်လောင်သည့်အသံ
dry wine /sweet wine ၀ိုင်ပြင်း/ ၀ိုင်ပျော့။
dry weather / wet weather ချောက်သွေ့သည့်/စိုစွတ်သည့် ရာသီဥတု။
strong coffee /weak coffee ကော်ဖီပြင်း/ကော်ဖီပျော့။
a strong accent /a slight accent စကားအရမ်းဝဲ။ / အနည်းငယ်ဝဲ
hard work (hard physically or mentally) အလုပ်ကြမ်း (ကိုယ်/စိတ်)
a great success (= very successful) အလွန်အောင်မြင်ခြင်း။ ကြီးမားသည့်အောင်မြင်မှု။
heavy traffic (=alot of cars) ယာဉ်ကြောကြပ်ခြင်း။
heavy rain (= rainingalot) မိုးများခြင်း။
I can’t understand his English because he has suchastrong accent.
သူက စကားအရမ်းဝဲတော့ သူ့အင်္ဂလိပ်စကားကိုနားမလည်ဘူး။
It was hard work organising the conference, but I think it wasagreat success.
ညီလာခံတစ်ခုကျင်းပရတာ ခက်ခဲတဲ့အလုပ်ပါ။ ဒါပေမယ့် အောင်မြင်တယ်လို့ထင်တယ်။
You always get heavy traffic during the rush hour.
ရုံးတက်ရုံးဆင်းချိန်ဆို အမြဲတမ်း ယာဉ်ကြောပိတ်တော့တာပဲ။
Adverb + adjective အတွဲ
အောက်ပါဥပမာအားလုံးတွင် ကြိယာဝိသေသနအားလုံးသည် very “အလွန်” ဟူသည့်အဓိပ္ပါယ်တစ်ခုတည်းဆောင်သည်။ သို့ရာတွင် ၄င်းတို့နှင့်တွဲသုံးသည့် နာမ၀ိသေသန များမှာတော့ကွာခြားကြသည်။
I was terribly sorry to hear about your accident.
He’s highly unlikely to come now. (= I’m almost sure he will not come)
သူ မလာဖို့ အလွန်များပါတယ်။
She is fully aware of the problem. (= she knows all about the problem)
သူ ပြဿနာကို ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်။
အဘိဓါန်ကောင်းတစ်ခုသည် collocations မိတ်ဖက်စကားလုံးများ ကိုဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ မိမိအနေဖြင့် စာတစ်ပိုဒ်ဖတ်သည်ဖြစ်စေ၊ သတင်းတစ်ပုဒ်နားထောင်သည်ဖြစ်စေ collocation များအား သတိမူ ရေးမှတ်တတ်သည့်အကျင့်ရှိပါက သင်၏ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည့် အင်္ဂလိပ်စကား သဘာဝကျ ကျွမ်းကျင်စွာ ပြောဆိုတတ်ရေး အတွက် ကောင်းမွန်သည့်လမ်းစပင်ဖြစ်သည်ဟု အားပေးလိုက်ချင်ပါသည်။
အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (famous/absolutely/day/die/g...
Permalink Reply by Corazon on January 13, 2014 at 15:49
She madeamistake. [NOT She madeamistake.] သူအမှားလုပ်မိတယ်။
ဒီနေရာလေးက typing error လို့ထင်ပါတယ်။ [NOT She didamistake] လို့ ရေးချင်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Star MemberPermalink Reply by zar ni (My Way!) on January 13, 2014 at 18:46
ဟုတ်ပါတယ် Corazon ခင်ဗျား။ typo error ပါ။ ထောက်ပြပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ပြင်လိုက်ပါမည်ခင်ဗျား။
Permalink Reply by Kyaw Zeyar Oo on January 23, 2015 at 11:18
It was very helpful to me!Thank You!